हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील र रणनीतिक अवस्थामा रहेका मुलुकहरूका लागि विदेश सम्बन्ध सञ्चालन राजनीतिको एक अभिन्न अङ्गजस्तै बन्दछ । अलिकति सन्तुलन गुम्यो भने त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावहरू हामीले अनुमान गरेभन्दा फरक हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले त्यसमा ध्यान दिए पनि संसद्भित्रका समग्र अभिव्यक्ति र बाहिरका क्रियाकलापहरू हेर्दा सन्तुलन कायम गर्न कताकता चुकेको देखिन्छ । विदेश सम्बन्ध भनेको यस्तो कुरा हो, अत्यन्त मन मिल्दा पनि त्यसलाई लपक्कै भएको रूपमा देखाउन मिल्दैन, अनि अत्यन्त मन नमिल्दा पनि त्यसलाई त्यस रूपमा देखाउन मिल्दैन । विद्रोही राजनीति गरेर आएकाले होला, प्रचण्डका अभिव्यक्तिमा त्यसको कमी महसुस हुन्छ । भारत र चीनबीच सन्तुलन हामीले हाम्रो मूल्यमा गर्ने हो, उनीहरूको होइन । साथै, आजको दिनमा एउटा देशका विरुद्धमा अर्को देशको कार्ड खेल्छौँ भन्ने कल्पनामात्रै पनि हाम्रा लागि आत्मघाती हुन्छ । नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव आफैँमा नराम्रो कुरा होइन । तर, त्यसका लागि देशभित्र राष्ट्रिय सहमति र छिमेकीहरूको मनोविज्ञान बुझ्ने कुरा हाम्रा लागि महŒवपूर्ण हुन्छ । एकतर्फ ढल्केको विदेश नीतिलाई सिधा उभ्याउने बनाउनका लागि नेतृत्व तहबाटै सुझबुझ र दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ, जसको नेपालमा सर्वथा अभाव छ र यो पनि घरेलु खपतको विषय बनेको छ । प्रचण्डका मन्तव्यहरूमा राम्रै चिन्ता प्रकट भएको छ, ‘....के हामीले राजाको कालको भन्दा फरक, राजतन्त्रकालको भन्दा फरक विदेश नीति विकास गर्न सक्छौँ ? हामी गणतन्त्रको विदेश नीति, राजतन्त्र र सामन्तीतन्त्रको छाप नभएको विदेश नीति विकास गर्न सक्छौँ ? ...सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति विकास गर्ने विषयमा अत्यन्त कम ध्यान दिएका छौँ ।’ अब हामी स्वयम्ले यस प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ ।